Ukrebe omhlophe: ukutya kunye neempawu eziphambili | Ngeentlanzi
Abantu abaninzi bayoyika ukrebe omhlophe nangona bengakhange baqhele ukubahlasela. Iingcali zookrebe zithi inyama yethu ayibangeli mdla kwaphela. Ubungqina boku kukuba ookrebe baluma iindadi kanye kuphela kwaye abaphindi. Oko kuluma kukungcamla inyama kamva abangayingcamliyo kuba abayithandi. Kucingelwa ukuba ukrebe unezivamvo eziphakame kakhulu, nangona iphambanisa abantu nezinye izilwanyana eziyinxalenye yokutya kwayo ezinje ngamatywina.
Kweli nqaku siza kuhlalutya nzulu ukrebe omhlophe. Siza kufunda ngebhayoloji, ukuhanjiswa, ukutya kunye nendlela yabo yokuphila. Ngaba uyafuna ukwazi yonke into ngesi silwanyana sidumileyo?
1.1 Ubukhulu nolusu
1.2 Inkqubo yovalo kunye nephunga
3 Ukutya okrebe omhlophe
5 Indoda nookrebe abamhlophe
Ngethamsanqa, kubantu abahlaselwa sesi silwanyana, akusoloko kubiza ubomi babo. Xa ukulunywa kukrebe kuba nzima ukopha ukuba kuyeke, kuxa iye iba yingozi kakhulu, ide ibangele ukufa. Kule meko, abo bajikeleze ixhoba kufuneka baqhubeke ngokukhawuleza. Igazi elichitheka emanzini linokuba ngumtsalane kwabanye ookrebe.
Kwaye kukuba ukrebe uthathwa njengoyena mrhamncwa mkhulu wolwandle. Ikho kulwandlekazi lwehlabathi. Bahlala bebizwa ngokuba yi "Great White Shark" kuba abayeki ukukhula kubomi babo bonke. Indala isilwanyana, iya kuba sikhulu ngobukhulu. Abafazi bakhulu kunamadoda. Umntu omdala unokulinganisa ngokugqibeleleyo phakathi kwe-4 kunye ne-5 yeemitha ubude kunye nobunzima phakathi kwe-680 kunye ne-1100 kilos. Le milinganiselo iyenza ibe yingozi ixhoba.
Amazinyo abo anamandla abanzi kwaye angunxantathu kwaye bayayisebenzisa ukukrazula ixhoba labo kunye nokutya inyama. Enkosi kubo banokubambelela kubo de babasika. Xa amazinyo ewa okanye eqhekeka, afakwa amatsha, kuba anemigca emibini ukuya kwemithathu yamazinyo akhula ngokuqhubekayo.
Ulusu lwayo lurhabaxa kwaye lwenziwe ngezikali ezibukhali. Ezi zikali zibizwa ngokuba ziidermicles zedermal.
Inkqubo yovalo kunye nephunga
Ngokubhekisele kwinkqubo yemithambo-luvo, inesifo esibi kakhulu, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba bakwazi ukubona ukungcangcazela emanzini kwiimitha ezininzi kude. Ndiyabulela kule nqanaba lokuqonda, banokuzikhokela ngokunyikima kwixhoba elibaqaleleyo kwaye bazingele.
Ingqondo yevumba nayo iphuhlisiwe. Njengesilwanyana esidla inyama, inako ukufunxa amathontsi egazi ukusuka kumgama omde kumyinge wamanzi ayijikelezileyo. Xa kukho igazi, ubukrakra bukakrebe buyaphindaphindeka.
Into yokuba ibizwa ngokuba ngookrebe abamhlophe kungenxa yokuba azifumanekanga iisampulu eziqhelekileyo, kodwa ziziialbhino.
Esi silwanyana sinokwabiwa ngokubanzi. Bayakwazi ukuhlala emanzini abandayo kunye nakweleenjiko. Imetabolism ephuhlisiweyo iyabavumela ukuba bahlale beshushu emanzini, nangona bengenako ukumelana nobushushu obugqithisileyo.
Indawo yokuhlala kukakrebe omkhulu omhlophe isemanzini anzulu kwaye kufutshane nonxweme. Kulapho inani elikhulu leentlobo zasemanzini zijolise khona. Ke ngoko, onke la maxhoba asebenza njengokutya kukakrebe. Ngaphandle koku, ezinye ii-shark zifunyenwe kubunzulu beemitha ezili-1875.
Eminye imimandla kunye nemimandla apho le ntlanzi ihlala khona: ngamanzi eGulf of Mexico, eFlorida nakwimpuma ye-United States, eCuba, eHawaii, e-Australia, eNew Zealand, eJapan, eMzantsi Afrika, eNgilani naseCape Verde Islands nakwiiCanary Islands.
Ukutya okrebe omhlophe
Xa esi silwanyana sincinci, sitya kakhulu iskwidi, imitha kunye nezinye ookrebe abancinci. Njengokuba bekhula kwaye beba ngabantu abadala bayakwazi ukutyisa amatywina, ihlengethwa, iingonyama zolwandle, amatywina endlovu, ufudo kunye nemizimba yemikhomo.
Inkqubo ayisebenzisayo ukuzingela amaxhoba imalunga "nokulandela." Ifihla phantsi kwexhoba ukuba idade ngokuthe nkqo kwaye iyothuse ngaphandle kokukwazi ukusabela nokuzikhusela. Ngenxa yokulunywa kukakrebe omhlophe, ixhoba liyafa ngenxa yokulahleka kwegazi okanye ukusikwa kwentloko. Izihlomelo zeVital ezifana namaphiko nazo zinokwaphulwa.
Ookrebe abamhlophe abangamadoda bafikelela ekuvuthweni ngokwesondo malunga neminyaka elishumi. Abafazi, kwelinye icala, bathatha iminyaka eli-10 ukuya kweli-12. Esi sizathu sokuba abantu ababhinqileyo bakhulu. Kuba ukukhula kwabo ngokwesondo kusemva kwexesha, bachitha ixesha elininzi ekukhuleni komzimba.
Xa bekwixesha lokukhwelana baba ndlongondlongo kakhulu. Indoda iqala ukuluma umntu obhinqileyo ngexesha lokuxubusha ukuya kwinqanaba lokonakalisa. Kuyafana nakwiifudo (ikhonkco). Ke ngoko, kuqhelekile ukubona abantu ababhinqileyo benamanxeba ikakhulu kwimiphetho. Bazala kwakhona emanzini afudumeleyo ngexesha lasehlotyeni-ehlotyeni.
Olu hlobo luyi-ovoviviparous, kuba amaqanda, adla ngokuba mabini ukuya kwishumi, ahlala esibelekweni kangangeenyanga ezili-12 de ade aqandusele. Nangona ingakhange imiselwe kakuhle, iimeko ze-intrauterine cannibalism zinokwenzeka, kuba amantshontsho abuthathaka angasebenza njengokutya kwezi zikhulu.
Xa zizelwe zingaphezulu kwemitha ubude kwaye ziyashenxa kunina. Kwiimeko ezininzi, umama uyabadla abantwana bakhe. Ayisebenzi njengomama ngokwayo, kuba ayikhuseli kwaye ayikhathaleli. Ukususela ekuzalweni bazimele ngokupheleleyo.
Ukulindela ubomi kuphakathi kweminyaka eli-15 ukuya kwengama-30.
Indoda nookrebe abamhlophe
Le ntlanzi yoyikwa kakhulu ngabantu, kuba ibonakalise uhlaselo oluninzi kubantu abenza i-surfing, ukuntywila, ukuhamba ngephenyane okanye ukuqubha. Malunga nabantu abangama-311 bahlaselwe kwihlabathi liphela.
Nangona umntu ongatshatanga engenako ukulwa nookrebe omkhulu omhlophe, ukuloba kwezemidlalo kuyabanciphisa abantu. Abanye bayazizingela, besithi zimele ingozi kubahlambi, ezichaphazela ukhenketho kumazwe athile.
Kwaye wena, ucinga ukuba ukrebe omhlophe sisoyikiso esikhulu ebantwini?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Ukrebe omhlophe